Momba anay - Tangshan X-Nature Artific Turf Co., Ltd.
Izahay dia mifikitra amin'ilay hevitra fototra “Fototra artifisialy farany any Shina, feon'ny fieritreretana ary famitana mazava tsy misy lozabe”, manantena ny hiara-hiasa aminao am-pahatsorana mba hanatsara ny tontolontsika
10 taona niainany tamin'ny ahitra artifisialy
Tangshan X-Nature Artific Turf Co., Ltd. dia orinasam-pamokarana manao fikarohana, famokarana sy marketing amin'ny ahitra artifisialy. Manana traikefa mihoatra ny 10 taona isika amin'ity sehatra ity.
70000 metatra toradroa famoahana isan-kerinandro
Manana ny tsipika famokarana mandroso indrindra izahay, ary ny tsipika famokarana telo, misy haitao matihanina, rafitra "famokarana mandeha ho azy", manao ny loko milamina kokoa ary mampihena ny vidin'ny famokarana. Ahitra X-natiora mampiasa fitaovana avo lenta. ary ny fahaiza-mamatsy dia 70000 metatra toradroa isan-kerinandro.
Rafitra kalitao azo antoka
Nahazo rafitra telo momba ny fitantanana kalitao sy ny fitantanana ny tontolo iainana ary ny fitantanana ny fahasalamana sy fiarovana amin'ny asa avy amin'ny antoko fahatelo manam-pahefana. nandalo ny fitsapana SGS ihany koa izahay ary manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Nandalo fitsapana mifandraika avy amin'ny FIFA Laboratory ny fibra ataonay. amin'ny resaka fanavaozana, nahazo mari-pankasitrahana momba ny patanty maro izahay izay navoakan'ny biraon'ny fanjakana ara-tsaina.
Lavorary aorian'ny rafitra serivisy fivarotana
Ny sampana serivisy aorinan'ny varotra sy ny teknolojia anay dia matihanina amin'ity ahitra artifisialy ity nandritra ny 10 taona, ny traikefanay dia tsy ny fanomezana vokatra sarobidy ihany fa ny fanaporofoana tanteraka ny serivisy aorian'ny varotra ao anatin'ny 24 ora